Tababarka Shabakada Iskuduwidda Isticmaalka Khadka Isticmaalka Khadka Isticmaalayaasha ee aan Isticmaalin
Maalmahan, internetku wuxuu noqday ilaha koowaad ee halka ugu badan ee maamulayaasha iyo websaydhka baadhayaashu waxay raadiyaan xogta ay u baahan yihiin. Shabakadu waa mashiin ballaaran, dadka waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan qalabka saxda ah si ay u soo saaraan dhammaan macluumaadka ay rabaan. Mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan waa in la ogaado sida loo dabagalo datasetka saxda ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay rabaan inay xoqaan fiyuuska mashiinka fanka iyo falanqaynta natiijooyinka dambe.
Si kastaba ha ahaatee, marka hore, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin inay ogaadaan siday u bilaabi lahaayeen mashaariicahooda. Haddii ay rabaan, waxay xoqin karaan feylka lafa-gacmeedka ee bogga internetka iyadoo la adeegsanayo Python.
Shabakadda Wareejinta: Qalab saarista Wax-ku-oolka ah
Web Isku-duubista ayaa ka caawin kara raadiyaha shabakada si ay si toos ah u helaan tiro macluumaad ah oo ka socda bogagga internetka ee shabakada. Waa qalab wax ku ool ah oo awood u leh inay bixiyaan natiijooyin gaar ah daqiiqado gudahood. Maanta, maareeyayaasha badan ee iibiya waxay isticmaalaan qalabkan si ay u soo saaraan qiimaha, liisaska badeecadaha iyo wax ka badan. Tusaale ahaan, dadka isticmaala waxay codsan karaan shabakadda shabakadda si ay u siiyaan liiska waxyaabaha ay xiiseynayaan, iyo sidoo kale qiimeyntooda shabakadda internetka e-shop. Xaqiiqdii, isgaadhsiinta shabakada waa hab wax ku ool ah oo lagu soo ururiyo xogta aad u baahan tahay iyo hagaajinta tayada alaabta ama adeegyada la bixiyay.
Qaar ka mid ah Qorsheynta
Raadiyaha Webka ee doonaya inay dhisaan macquul ah sawir ay isticmaalaan waa inay sameeyaan qorshahooda u gaarka ah. Marka hore, waxay u baahan yihiin inay go'aamiyaan nooca macluumaadka ay rabaan inay ka soo ururiyaan tan ama websiteka. Tusaale ahaan, waxay rabi karaan inay soo saaraan bogag ay ku jiraan macluumaad ku saabsan beero farsamo. Tani ma aha dhibaato weyn sababta oo ah waxaa jira bogag badan oo bixiya macluumaadkan.
Haddii ay doonayaan inay xoqdo warqad ay ku helaan dhammaan macluumaadka ku saabsan bejadaha farsamada, waxay u baahan yihiin inay eegaan xeerka khaaska ah (HTML) ee beeraha farshaxanka bogga internetka. Waxay u baahan yihiin inay maskaxda ku hayaan in badiyaa daalacashada internetka ay bixiyaan hab si ay u ogaato websiteka HTML-koodka leh kaliya guji. Tusaale ahaan, Google Chrome, raadiyeyaasha webka ayaa riixi kara unug ku yaal bogga qaar ka dibna riix 'Baaritaan,' si aad u aragto code HTML.
Macluumaadka Beeraha iyo Breweries
Bariiska kaydka xogta waa sahlan in la abuuro. Raadinta Webka kaliya waa inay doortaan dhamaan siraha ku habboon ee dataset, ka saar wixii faafaahin ah ka dibna dib u dhigo. Adoo cusbooneysiinaya taxanaha, samee aqoonsi gaar ah ee warshad kasta. Waxay u baahan doonaan aqoonsigaan marka ay abuurayaan dataset for beers ah sababta oo ah waxay sidaan u heli karaan fursad ay kudhex gashadaan hal kasta oo idil oo leh aqoonsi gaar ah. Sidoo kale, waxay ka dhigi karaan qiyaasta dataset ee xayawaanka oo badalaya dhammaan xogta soo noqnoqda ee ku saabsan hadhuudhka, sida magacyada iyo goobaha. Kadibna waxay la mid noqon karaan nooc kasta oo beeraley ah oo leh nooc ka mid ah biir ah.
Isticmaalaan doorsoomayaal, sida Magaalada iyo Gobolka
Iyadoo la adeegsanayo macmiilaha maqaayadaha, waxay ka sameysan karaan xarumo ay ku taalo goobaha quraaradaha, sida magaalada iyo gobolka oo ay ku yaaliin barkeed kasta. Waxay kala saari karaan labadan doorsoome iyada oo la adeegsanayo hawlaha kala-guurka Source .